१२ पढ्ने युवतीको जिन्दगी ब’र्वाद पारेर यसरी फ’रार भए युवा, रुँदै गुहार माग्न आइन् मिडियामा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
December 22, 2020 December 22, 2020 AdminLeaveaComment on १२ पढ्ने युवतीको जिन्दगी ब’र्वाद पारेर यसरी फ’रार भए युवा, रुँदै गुहार माग्न आइन् मिडियामा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
सामाजिक संजालमा सम्बन्ध जोडिने र टुट्ने घ’टना नौलो हैन । सामाजिक संजालमा चिनजान गरेर प्रेममा परेर राम्रो घर बसाएकाहरु नभएका हैनन् । तर कति जोडीहरु भने जीवनभर पछुताएर बसिरहेका छन । यस्तै रुपन्देही बुटवलका सुन्दर कुमार श्रेष्ठ र लम्जुंगकी संगीता श्रेष्ठबीच प्रेम भयो । परिवारले छुटाउन खोजे तर उनीहरु परिवारको वि’रु’द्धमा गएर भागेर विबाह गरे र नुवाकोटमा गएर डेरा गरेर बसे ।
सबै कुरा ठीक र राम्रै चलि रहंदा जब श्रीमान सुन्दर कुमार बे’पत्ता भए तबदेखि संगीताको दिन पनि रात जस्तै भएर बितिरहेको छ । फेसबुके माया प्रेमको यो जोडी अहिले सुन्दर कुमार गायब भएदेखि संगीता श्रीमानको खोजीमा एक्लै भौंतारी रहेकी छन् । उनी भन्छिन्,‘म उस्लाई सात जुनीसम्म पनि कुर्न तयार छु ।’ फेसबुकबाट शुरु भएको चिनाजान र त्यसपछि निरन्तरको बोलीचालीले गर्दा बसेको माया प्रेमको शुरुवात नहुँदै अन्त्य भएको छ ।
सुन्दर र संगीताको सम्बन्धलाई परिवारले नस्वीकार्दा पनि यी दुवैले एकअर्काको साथ दिई नै रहे । त्यसैको नतिजा स्वरूप उनीहरुले भागी विबाह पनि गरे । तर अचानक के भईदियो सबै कुरा सक्किएको बताउँछिन् संगीता । श्रीमानको खोजी गरिदिन मिडियासंग गुहार माग्दै संगीता यसो भन्छिन । भिडियो हेर्नुहोस: